कोरोना को सकियो चिन्ता आयो एस्तो खो,प( हेर्नुहोस भिडियो सहित ) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना को सकियो चिन्ता आयो एस्तो खो,प( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
हामीकहाँ प्रयोग गर्दै आएका धेरैजसो खो,पमा मरेको भा,इरस वा ब्याक्टेरिया हुन्छ अथवा त्यसमा कमजोर बनाइएका जीवित भा,इरस हुन्छन् । तिनले शरीरमा गएर कीटाणु,विरुद्घ लड्ने प्राकृतिक एन्टि,बडी निर्माण गर्छन् । विकासका क्रममा रहेका कोभिड–१९ वि,रुद्धका खो,पमा निष्क्रिय वा कम,जोर भा,इरसको खोप,समेत छ । हरेक खो,पले खास रोग,विरुद्ध दिने सुरक्षाको समयसमेत फरक–फरक हुन्छ ।
ड,ब्लूए,चओ,का अनुसार को,भिड–१९ का लागि विकास गरिएको अर्को प्रोटिनमा आधारित खोप हो जसमा प्रोटिन वा प्रोटिनको सेलको हानिरहित अंश उपयोग गरिन्छ । त्यसले प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई सुरक्षित रूपले उत्पन्न गर्न कोभिड भा,इरसको नक्कल गर्छ । यस्तै, भा,इरल भेक्टर खोपमा रोग उत्पन्न नगर्ने उद्देश्यले आनुवांशिक रूपमा इन्जिनियरिङ गरेका भा,इरसको उपयोग गरिन्छ ।
तर सुरक्षित रूपमा प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न को,रोना भा,इरस प्रोटिन उत्पन्न गर्छ । आरएनए र डीएनए खोपअन्तर्गत प्रोटिन उत्पन्न गर्न आनुवांशिक रूपले इन्जिनियर्ड आरएनए र डीएनए उपयोग गरिन्छ जसले आफैं प्रतिरक्षा प्रक्रियाको संकेत दिन्छ ।
यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३० दिनसम्म र कोठाको तापक्रममा २४ घण्टासम्म सुरक्षित रहन सक्ने भएकाले पनि उत्साह बढेको छ । कोभिडका लागि हालसम्म दाबी गरिएको यो सबैभन्दा प्रभावकारी खोप हो ।केही दिनअघि फाइजर कम्पनीले तयार गरेको खोप ९० प्रतिशत व्यक्तिमाथि सफल भएको दाबी गरिएको थियो ।
खासगरी विपन्न मुलुकका लागि भण्डारण चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ थियो । रुसले निर्माण गरेको ‘स्पुतनिक–५’ खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी दाबी गरिएको छ । फा,जरको खोप हाम्रा लागि मात्र नभई छिमेकी भारतल,गायतका देशका लागि समेत टाउको दु,खाइ भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘मोडर्ना खोपको प्रभावकारिता मात्र नभई भण्डारण गर्ने तापक्रमले पनि आशा जगाएको छ ।
यसका लागि हामीसँग भएकै भण्डारण र परिवहनको व्यवस्था उपयोग हुन सक्छ ।सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले हाल अन्तिम परीक्षणमा रहेका खोपलाई धेरै जनसंख्यासम्म पुर्याउने सबैभन्दा ठूलो अवरोध त्यसको भण्डारण र ओसारपसार रहेको बताए । सामान्य कोठाको तापक्रममा दुई–तीन घण्टा राख्न नसकिने खोपको नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा कामै नरहेको उनले बताए ।